DAMACA KALIGITALIYE & SOOMAALIYA OO MAR KALE SIGATAY – Radio Daljir
Abriil 29, 2021 1:09 b 0
TOLOOW MAXAA DHICI LAHAA HADDII AAN LAGA HORIMAN LAHAYN DAMACA FARMAAJO?
Xilli korordhsiga Madaxweyne Farmajo isku dayey waxa uu noqon la ahaa tawrad aan dhiig ku daadan sida tawradii bilaa dhiiga dhacday ee 1969 (bloodless coup d’e’tat). Kaliya waxay ku kala duwanaan lahaayeen in uu kan Farmaajo noqon lahaa afgambi aanu milatari horumood ka ahayn.
Waxa se uu abuuri kari lahaa waxa ay Rosenberg iyo Jackson ku sharraxeen buugooda caanka ah “autocratic rule” ama maamul kaligii talis ah. Buugaasi oo aad muxtarim ka aha barashada culuunta siyaasiga ah ee Afrika, oo la yidhaa “Personal Rule in Black Africa,” ama “Kaligii Talisnimada Afrikada Madow,” waxa la qorey 1980-kii xilli Afrika la tacaalaysay nidaamkaasi isaga ah.
Dadka arrimaha Soomaaliya daneeyaa wey ku kala duwanaan karaan qiimaynta xeeladaha lagaga horyimid damaca Madaxweyne Farmajo.
Qaar waxay odhan karaan murashixiintu Madaxweyne Farmaajo wey u tol sheegteen. Waayo, ayey odhan karaan, waxa ragaasi isku halaynayeen saldhigooda ah Muqdisho. Waxay muddo gaaban isku keeneen xoog caabin kara awooda uu MW Farmajo baryahaan urursanaayey.
Dooddaas dhawr arrimood ayaa burin kara: (1) taageerayaasha Farmajo oy kamidyihiin RW Rooble, Madaxweynayaal Qoorqoor, Guudlawe, Guddoomiye Filish iyo kuwo kale oo badan iyaba saldhigooda ayey Muqdisho u arkaan, waxaanay nafta u bixin rabeen MW Farmajo.
Dhinaca kale, waxa Murashixiinta la safnaa Madaxweyne Deni iyo Madaxweyne Axmed Madoobe oon iyaku sal ku lahayn Muqdisho, laakiin sida Qoorqoor iyo Guudlaawe danley ama stakeholders ah. Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Afhayeen Mursalna labada dhina ayey iyana kala raaceen. Bi macni, xulifays oo mabda’ ku qotoma ayaa la isku raacay.
Murtiduse waxay tahay Murashixiinta Muqdishu (Xassan Sheikh, Sherif Axmed, Cabdiraxman Cabdi Shakuur iyo inta kale ee ka qaybqaadatay ka hor imaatinka Madaxweyne Farmajo iyo xili koradhsiguusu) Soomaali way badbaadiyeen. Murashixiintu iyo saaxiibadood waxay Soomaaliya ka badbaadiyeen AFGAMBI iyo KALIGIITALISNIMO ama AUTOCRATIC RULE. Taariikhdaaana sidaasi u xusi doonta.
Soomaalidu sideedaba waa “republicans” ama dad aad u kani adag marka laga fiiriyo xagga xukunka – waxa kaliya ee Soomaali lagu xukumi karaa cadaalad, sinnaan iyo in ay xukuumadda awoodda markaas haysa oggolaansho ka haysato shacabka. Xoog Soomaali laguma xukumi karo. Dhimasho iyo burbur ayey doorbidaan haddii la jujuubo.
Dib ugu noqo taariidhdeena: 1960-1969 waa la is jiidjiidan jiray, laakiin dagaalo kama qarxi jirin. Hase yeeshee 1969-1990, kaligiitalisnimo waxay keentay amase ay Soomaali u geysatay halkan lagagama sheekayn karo.
Sidaas darted, siyaasiyiintu waa in ay dhawraan axdiga (constitutionka), nabadda, xal u raadinta arrimaha cakiranee dhinaca siyaasada ah (conflict resolution) iyo tixgalinta taariikhaha la soo maray.
Haddaan maanta laga hortagi lahayn kaligiitalisnimada uu Madaxweyne Farmaajo rabay, burbur iyo 30 ilaa 40 sano oo kale oo cabudhin dhinaca siyaasadda iyo xaquuqal iinsaanka ayaa la dhaxli lahaa.
WQ: Faisal Roble | Faisal Roble
Siyaasadda & Dhaqaalaha 503 Wararka 26315
Tartan & Tacliin: Warbixintii 8aad, Dugsiyadii Tartamay iyo cida ay guusha raacday (daawo)